Gadzirira iyo yepazasi Nenzvimbo Kugadziridza
Ongororo ichangoburwa yeHVS Eco Services Facility Optimisation yakacherekedza mari ingangochengetwa ye $ 1,053,726 pagore - kudzikiswa ne14% pamitengo yesimba yegore pasifodhi yemahotera ane gumi neshanu ebasa riri munzvimbo dzakasiyana siyana muUnited States. Chine simba chivakwa optimization chishandiso ...
Nhanhatu Hot International Hotera Maitiro akurukurwa
masimba matanhatu ane simba aitsanangudza ramangwana rekugamuchira vaeni uye mafambiro Residents First Tourism inoda kupa kune hupenyu hwevagari. Munzvimbo dzakakwirira-kudiwa pane panofanirwa kuve nesangano rakananga kunononoka, kusingaperi kusanganisa kukura kunoenderana nekuremekedza vagari. Geerte ...
Kuvandudza Hotel ROI - Kufunga Kunze kweBhokisi kubva Dhizaini kuenda kune Kushanda
Seindasitiri pane chikonzero chekuti mahotera agone kushanda. Iyo denda yakatidzidzisa kufungisisa mune ino divi uye nekuvandudza zvinhu zvehotera izvo zvinogona kutyaira yakakwira ROI. Izvo zvinogona chete kuitwa kana isu tichitarisa pakuita shanduko kubva Dhizaini kuenda kune Mashandiro. Sezvineiwo, isu tinofanirwa kuita shanduko kune indasitiri stat ...